★မြန်မာ့အလင်း★: ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မြန်မာတွေကို စာနာပေးကြပါ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စစ်သားနဲ့ ကုလားတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဘယ်လိုဆော်ကားလဲဆိုတာ အထက်ဒီဗီဒီယိုမှာကြည့်ပါ။ ဒို့ဘုန်းကြီးကို သေနတ်နဲ့ချိန် ဓါးနဲ့ထောက်ပြီးဆော်ကားတဲ့ အကြောင်းကို ကြည့်ပါ။ ကျွန်ကုလားတွေက သူတို့ခံရပြီဆိုရင် အသံသေး အသံညှောင်နဲ့ အော်တယ်။ တကမ္ဘာလုံးကို ဆူညံသွားအောင် အော်ဟစ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး.. မေတ္တာတရား… လူအခွင့်အရေးတွေကို ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ဘာသာအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရေးတည်ဆောက်ဖို့လည်း ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က မတရားလုပ်နေရင် ဘယ်တော့မှအသံမထွက်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်က ကုလားတွေဘလော့ကို လေ့လာကြည့်ပါ။ သူတို့ခံရပြီဆိုရင် သနားဖွယ်ဖြစ်အောင် ရေးတာတွေ မြင်ရမှာပါ။ တကယ် ဒုက္ခသည် မဟုတ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အတွက် သနားဖွယ်ရေးပြတာ မြင်ကြတယ်မဟုတ်လား? အခုဆိုရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ မွတ်ဆလင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအပေါ် မတရားလုပ်နေတာကို ဘာမှကို အသံမထွက်ဘူး။
ကျုပ်တို့ကဒေါသထွက်ပြီး မွတ်ဆလင်ကို မုန်းပြီးပြောနေတယ်လို့ ယူဆနေပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။ ကုလားတွေက သူတို့ဘက်က ဘယ်လောက်ပဲလုပ်လုပ် တကယ်ကို မသိဟန်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါ။ ဥပမာ . . mahathir mohamad ဟာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါလျက် ဂျူးတွေကို အစုလိုက်သတ်ဖို့ 2003 ကရော မနေ့တနေ့ကပါ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စဟာ လူမျိုးရေး ဘာသာရေးမုန်းတီးမှု ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ လူအခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်တာဖြစ်သလို နိုင်ငံတကာ ဥပဒေကိုချိုးဖေါက်တာလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်မွတ်ဆလင် ၀က်ဆိုက်ကမှ ဝေဖန်ရှုံ့ချမှုမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ (ကျုပ်တို့ဘလော့က မွတ်ဆလင်ဝါဒကို အမြစ်ဖြုတ်တော့ ငိုသံလေးနဲ့ ပြောနေကြတယ်။ ဒါတောင် mahathir mohamad လိုသတ်ဖို့ပြောတာ မဟုတ်သေးဘူးနော်) ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံအားလုံးမှာ တခြားဘာသာတွေကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်မပေးပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီမွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာကို တခြားဘာသာကို လွတ်လပ်စွာ ပြောင်းလဲခွင့်မရှိပါဘူး။ အဲဒီကိစ္စကို ဘယ်မွတ်ဆလင် အဖွဲ့အစည်းကများ ထုတ်ဖေါ်ပြီးတော့ ကန့်ကွက်ပါသလဲ? (ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ပလီကနေ ခွေးအူသံကြီးတွေ အသံချဲ့စက်ကနေ ထုတ်လွှင့်ခွင့်ပေးထားတာတောင် သူတို့က အခွင့်အရေးတွေ လိုချင်သလောက်မရသေးလို့ဆိုပြီး ၀ိုင်းအော်နေတာမဟုတ်လားဗျာ?)ကိုယ့်ဖက် သူ့ဖက်မျှတအောင် စဉ်းစားနိုင်စွမ်း လုံးဝမရှိပါဘူး။ လောကမှာစာနာစိတ်ကင်းမဲ့အောင် သင်ကြားပေးတာ မွတ်ဆလင်ဝါဒတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ယုတ်ညံ့တဲ့ဝါဒလို့ပြောတာပေါ့။ လူအခွင့်အရေး မြတ်နိုးတယ်... လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကို မြတ်နိုးတယ်လို့ ပြောနေတဲ့ ဒီမိုအဖွဲ့တွေထဲက ကျွန်ကုလားတွေဟာ လူလိမ်တွေသာဖြစ်တယ်။
သူတို့လူနည်းစုဖြစ်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင် ရှိသမျှနည်းပေါင်းစုံအသုံးပြုပြီး ယုတ်မာနေကြတာပဲ။ မွတ်ဆလင်အများစုရှိတဲ့ သူတို့နိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို အနိုင်ကျင့်တာ မထူးဆန်းပါဘူး။ လူအခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေလည်း အသံ တိတ်နေတယ်။ သူတို့ မကူညီတာပဲ ကျေးဇူးတောင်တင်မိပါသေးတယ်။ သူတို့ကူညီရင် ကျုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အသုံးမကျတာ လူပိုသိတယ်။ လူဆိုတာ မိမိကိုယ်ကို အားကိုးရမှာပဲမဟုတ်လား။ ယောကျားတွေဖြစ်ပါလျက်နဲ့ တခြားလူက လုပ်ပေးမှာကို စောင့်မျှော်နေတယ်ဆိုရင် ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
စဉ်းစားဖို့က . . . ကျုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို စော်ကားနေတာကို မသိဟန်ဆောင်နေရင်. . . . . အဲဒီဒေသက မြန်မာ့အနွယ်ဝင်တွေ ပိုပြီးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။ ပိုပြီးအနိုင်ကျင့် ခံရလိမ့်မယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို ဒုက္ခပေးနေတာကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း… အဲဒီဗီဒီယို ကော်မန့်မှာ သွားပြီး ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုကြပါ။ အဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာ လူနည်းစုဖြစ်တော့ အားငယ်မှုတွေရှိနေမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် စာနာစိတ်ထားပြီး အားပေးစကားလေးတွေ အဲဒီကော်မန့်မှာ ရေးပေးကြပါဗျာ။ မိမိ အပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်း ရေးသားပေးဖို့ စည်းရုံးပေးပါ။ အဲလိုလုပ်ရလို့ ခင်ဗျားအတွက် ဘာမှအပန်းမကြီးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မြန်မာတွေ အတွက်တော့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အားဆေးပဲဖြစ်မှာပါ။ေ၇နစ်နေသူအတွက်တော့ မြက်တစ်ပင်လေး တစ်ပင်ကတောင် တန်ဖိုးရှိတယ် မဟုတ်လားဗျာ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 2:32 AM